Gorsa hayyootaa 13 dhagayuufi dalagaa irra oolchuu qabnu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Gorsa hayyootaa 13 dhagayuufi dalagaa irra oolchuu qabnu
Jireenyaafi muuxxannoo hayyootaafi manguddootaa irraa waan heddu kan baratamu. Daandii isaan irraa waa ittiin barachuun danda’amu heddu. Inni tokkoo, tarii hawaasa tokko tokko keessatti inni guddichi, gorsa isaanii dhagayuudha. Dhagayuun qofti gahaa akka hintaane ifa. Gorsi hundis nama hundaaf nita’a jechuus miti.
Gorsi tokko tokko, sababa kamiifuu, dhagayuuf fedhii hinqabnu ta’uun nimala. Garuu, gorsa nammoonni umriifi beekumsaan nurra jiran muuxxannoo jireenyaa irraa nuuf qoodan fudhachuu diduun rakkoo mataa isaa qaba. Gama biraatiin gorsa isaanii dhagayuun osoo miila lamaan duduba dogoggoraa keessa hindhaabatin ammumaa fagotti tikfamuuf nugargaara. Gorsa asii gadii dhagayaan affeerraa kooti.
Ol’aantummaan nama irratti osoo hintaane ufii kee isa kaleessaa irratti (yeroo yerotti uf fooyyessanii argamuu) mirkaneeffadhu.
Nama raata’aa ykn daafuraa wojjiin moromii hinseenin. Gara xiqqeennaatti gadi siharkisu waan ta’eef.
Yeroo arii qabdu murtee cimaa hinfudhatin. Yeroo gammachuu ammoo waadaa gurguddaa hinseenin.
Waan baadhachuu dandeettu qofa guduunfadhu ykn wolitti qabadhu.
Gammachuun filannoodha. Kan achirraa hafe akkuma namoonni itti ilaalan.
Dhalaan abshaalli baredduudha akka jedhaniin dhagayuu feeti. Gama biraatiin, dhalaan bareedduun abshaala akka jedhaniin dhagayuu hawwiti.
Yoomuu waan hudarra feetu isa amma barbaadduun hingeeddarin.
Yaadadhu waan osoo hinhojjatin bira dabritetti gaabbuun kee kan hinoolle ta’uu.
Jireenya dhugaa, akka ufiitti, jiraachuuf akka keessi kee fedhu jiraachuuf uggi.
Waan bade namatti haqachuun rakkoo uumameef tasa fala hinta’u.
Nama intala tee akka fuudhu hawwitu fakaachuuf carraaqi.
Waan nama aarsutti maraachuun dura sa’aa 24 eegi. Yoo san booda sihinmaraachine ta’e, dhimichi waan guddaa irratti maraatan ykn sammuu dhukkubsatan miti.
Namni tokko maal akka fakkaatu, eenyumaa isaa, beeku yoo barbaadde, namni suni namoota isaa gadii akkamitti akka ilaalu ykn simatu xiinxalli.
Previous articleDargaggummatti qabxiilee kanniin irratti yoo hojjattan gaafa dullummaa hinseenoftan
Next articleDaqiiqaan dhumaa guyyaa har’aa sekondii 61 qabaachuuf deemti, jedha NASAn